Madaxweynaha Hirshabeelle, “Cunaqabatayn Diidnay!” – Radio Daljir
Madaxweynaha Hirshabeelle, “Cunaqabatayn Diidnay!”
Abriil 22, 2017 4:51 g 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Cosoble, oo shir jiraa’id ku qabtay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde kaddib safar uu kaga yimid Magaalada Bulaburde ee Gobolka Hiiraan ayaa kaga hadlay arrimo kale duwan oo la xiriira qaadkii labadii maalin ee la soo dhaafay ka degayay Magaalada Jowhar, hase ahaatee maanta aan ka dagin, iyo socdaalkii uu ku tagay Bulaburde iyo waxa uga qabsoomay safarkaasi.
Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo ka hadlay diyaaradihii qaadka ee labadii maalin ka dagayay magaalada Jowhar ee Xarunta Dowlad Goboleedka, isagoo sheegay in uu soodhoweeynayo cid kasta oo rabtaa garoomada Hirshabeelle in badeecadahooda ay ka dagsadaan ayna soodhoweynayaan, waxaana uu sheegay in uu maqlay in amar ka soo baxay Dowladda lagu joojiyay in diyaaradaha qaadka aynan ka dagi karin Jowhar, asna usaan aqbali karin in la cunaqabateeyo Hirshabeelle.
Madaxweynaha ayaa sheegay markii uu maqlay amarka diyaaradaha qaadka lagaga joojiyay Jowhar in uu wacay Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, waxna ka weydiiyay amarka. Sida uu yiri Ra’iisul wasaaruhu waxba kama oga amarka hadana waxaa socda baaritaan sababta.
Agaasimaha Madaxtooyada Puntland oo Burtinle Gaaray